यस्तो छ संसदमा देउवाको पक्ष र विपक्षको अंकगणित
सन्जिब बगाले काठमाडौं, जेठ २० print
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आइतबार संसद अवरुद्ध गरेन भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएका देउवाका पक्षमा संसदको स्पष्ट बहुमत छ। सरकारमा रहेका पार्टीका सांसदहरूको संख्यालाई मात्र आधार मान्दा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने संख्या पर्याप्त हुन्छ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसका २०७ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका ८२ र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सांसद छन्। फोरम लोकतान्त्रिकसँग राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (२ जना सांसद), थरुहट तराई पार्टी (१ जना सांसद), दलित जनजाति पार्टी (१ जना सांसद) ले एकता गरेर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बनेको छ। यी सबै सांसदले देउवालाई नै समर्थन गर्ने छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका एक सांसद सीमाकुमारी बिकले एकीकरण अस्वीकार गरे पनि देउवालाई मतदान गर्ने बचन दिएको सेतोपाटीलाई बताइन्।
तीन जना सांसद रहेको नेकपा संयुक्त अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँगै छ। उता, समाजवादी जनता पार्टी (१ सांसद) र अखण्ड नेपाल पार्टी (१ सांसद) पनि सरकारमा छ।
यी सबै हिसाब गर्दा ५ सय ९३ सदस्यीय संसदमा सत्ता गठबन्धनसँग ३ सय ११ सांसद छन्। यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छ।
यति मात्र होइन, ३७ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले यस विषयमा आइतबार मात्रै निर्णय हुने सेतोपाटीलाई बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि आइतबार १० बजे बैठक बसेर देउवालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिनेछ। जनता पार्टीसँग २४ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसले शनिबार आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा राजपा नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। उक्त बैठकपछि राजपा नेता राजेन्द्र महतोले आफ्ना मागबारे कांग्रेसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय निर्भर गर्ने बताएका छन्।
पन्ध्र जना सांसद रहेको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले बताए। उनका अनुसार यसबारे निर्णय गर्न सो पार्टीको आइतबार बिहान १० बजे बैठक बस्दैछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने आफूले गर्दै आएको संसद अवरोध जारी रहेकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिकाबारे अनभिज्ञ रहेको जनाएको छ। संसदमा एमालेका १ सय ८१ सांसद छन्। त्यस्तै, पाँच जना सांसद रहेको नेकपा माले र तीन जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।
विपक्षी मोर्चामा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (४ सांसद) ले यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको सांसद प्रेम सुवालले बताए। विपक्षी मोर्चाकै अर्को दल नेपाल परिवार दलका सांसद एकनाथ ढकालले भने देउवाले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको भन्दै यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
के गर्छ एमालेले ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद अवरोध जारी रहेकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिकाबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नै नभएको बताएका छन्। बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र संसदमा नपढी प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढाउन नहुने एमालेको अडान छ।
एमालेले भरतपुर महानगरपालिकामा रोकिएको मतगणना अघि नबढाएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरोध गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय शनिवार गरेपछि एमाले अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ।
‘संसदमा हाम्रो अवरोध जारी छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले शनिबार सेतोपाटीसँग भने, ‘परिवर्तित अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा हामी आइतबार ११ बजेसम्म एउटा टुंगोमा पुग्छौं।’
सभामुख घर्तीले के गर्छिन्?
एमालेले संसद अवरोध जारी राखेमा सभामुख ओनशरी घर्तीको कदम के होला भन्ने चासो धेरैले देखाएका छन्?
आइतबार दिनभरि पनि सहमति हुन नसके प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका अर्को दिनलाई सार्ने उनको योजना रहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार वासुदेव शर्माले बताए। ‘दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान, नियमावली र स्थापित मान्यताका आधारमा सभामुखले निर्णय लिनुहुनेछ,’ उनले भने।
एमालेले अवरोध गर्नुपर्ने कारण छैन: कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आइतबार जसरी पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन्।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभामुखले विधि र प्रक्रियामा रहेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताए। ‘एमालेले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन रोक्न मिल्दैन,’ उनले शनिबार सेतोपाटीसँग भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि एमालेले संसद अवरोध गर्नु संविधान र नियमावली विपरित हुने बताए। एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ देउवाको पक्ष र विपक्षको अंकगणित
सांसद संख्या – ५९३
बहुमतका लागि आवश्यक – २९८
माओवादी केन्द्र – ८२
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम – १७
साना दल – ५
स्वतन्त्र सांसद – १
जम्मा – ३१५
नेकपा एमाले – १८१
साना दल – ३
जम्मा – १९२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – ३७
संघीय समाजवादी फोरम – १५
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल – २४
नेपाल मजदुर किसान पार्टी – ४
साना दल– ४
जम्मा – ८५
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४ २२:२८:३१